Home Wararka (XOG) DFS oo qarineeyso geerida ku timid askarti tababarka loogu qaaday...
(XOG) DFS oo qarineeyso geerida ku timid askarti tababarka loogu qaaday Eritrea
Warar qarsoodi oo ay heshay warbaahinta MOL ayaa daaha ka rogeeysa in DFS ay qarineeyso geerida askartii tababarka loogu qaaday dalka Eritrea loona daad gureeyay dagaalkii kadhacay Gudaha EThiopia si ciidamada dowladaas ugarab siiyan.
Nasiib Xumo DFS ma adeegsan Ciidamada Xooga Dalka Soomaaliya balse waxeey ka faaideysatay dhalinyaradii tababarka loogu qaaday Eritrea waxaana halkaas qasaaro xoogan soo gaaray dhalinyaradii soomaaliyeed.
Dowlada Eritrea oo isku dayeeysa ineey xeeladeeso dhimashada dhalinyarada soomaaliyeed ee wadankaasi tababarka loogu qaaday ayaa so abaabushay qorshe lagu xalaaleynayo geerida dhalinyarada .
Ugu horeyn Dowlada Eritrea waxeey diyaarisay qorsho Afganbi ah taaso dhowrkii sano mar laqabto si loogu dilo masuuliyiinta dowlada katirsan kuwa laga shakiyo ama lagu doonayo in lagu muujiyo awooda Kaligii taliye Asis Aferwarki.
Markaan Afganbiga wuxuu ku saleesnaa mid lagu doonayo inlagu xalaaleyo dhimashada dhalinyarada soomaaliyed ee halkaasi tababarka u tagay.
Ugu horeyn sida warbaahinada caalamka ay qoreen dhamaadka sanadkii hore 2020 in uu dhacay isku day afganbi , ciidamada sameeynayay Afganbiga ay qabsadeen saldhig ciidan oo lagu tababaro askarta cusub .
DFS dhawaan waxeey qorsheyneysaa in JFS aysoo gaartay aqbaar naxdin leh taasi lagu sheegayo in dhalinyaradii tababarka u jirtay weerar kala kulmeen koox falaago ah oo afganbi damacsaneed halkaasna waxaa lagu laayay qaar kamid ah dhalinyarada ,
Dowlada Soomaaliya waxeey ugu tacsiyeeyneysaa CQS , Qoysaska ayka baxeen geesiyaashii Qaranka oo ayagoo shaqo qaran ku jiraa ku geeriyooday.
Lama ogo in ay aqbali doonan jiliinka cusub ee mardhaw damacsan yihiin madaxda DFS ineey ku beer laxoowsadaan shacabka soomaaliyeed iskana bari yeelan eedoda ah in askar tababar ku jirtaa loo daad gureeyo dagaal wadan kala kasocda.
lasoco wixii warar ah ee ku soo kordha ciidamada Eritrea lagu tababaray